Momba anay - Hebei Shengsong Trade Co., Ltd.
HEBEI SHENGSONG TRADE CO., LTD naorina tamin'ny 2015, hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1992, ShengSong dia nanolo-tena hanome entana tsara sy serivisy tsara. Tany am-piandohana, dia namokatra tariby mamatotra ihany izahay ho an'ny fanorenana, fa taty aoriana dia niitatra tsikelikely ny orinasa mba hampidirana fantsika sy famokarana net.Tamin'ny 2015, ny orinasa dia nohavaozina tanteraka, tsy manampy akoho tranom-borona sy ny biby fiompy cages, fa mandeha ho azy fitaovana maoderina amin'ny vokatra rehetra producte, ary koa nanao anarana vaovao HeBei ShengSong Trade Co., Ltd.
Amin'izao fotoana izao dia nahatratra 40000㎡ ny faritry ny orinasa, Tontolo ara-jeografika ambony: fototra famokarana fitaovana fanorenana, Shijiazhuang, Hebei, Shina.
Orinasa maoderina misy injeniera zokiolona 10, mpiasa ara-teknika maherin'ny 300 ary fitaovana famokarana sy fanaraha-maso maherin'ny 100.
Manaiky ny fitsapana rehetra izahay, izany dia manasongadina ny fanaraha-maso ny kalitao amin'ny dingana famokarana.
Ny vokatray dia mivarotra tsara eran'izao tontolo izao, ShengSong dia manantena mafy ny hametraka fifandraisana ara-barotra amin'ny orinasa hajainao amin'ny fototry ny tombontsoa iombonana amin'ny daty taloha!
Efa hatrany amin'ny "finoana tsara amin'izany, ny kalitaon'ny fahavelomana, ny laza aloha, ny fandresena-fandresena mahasoa" ho an'ny fitsipika.
1. Ankehitriny ny faritry ny orinasa dia nahatratra 30000㎡.
2. Tontolo ara-jeografika ambony: fototra famokarana fitaovana fanorenana, Shijiazhuang, Hebei, Shina
3. Ankehitriny SHENGSONG dia lasa orinasa maoderina misy injeniera zokiolona 10, mpiasa ara-teknika 300 mahery ary fitaovana famokarana sy fanaraha-maso maherin'ny 100.
4. Nanaiky ny fitsapana rehetra izahay, izany dia manasongadina ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanaraha-maso ny kalitao amin'ny fizotran'ny fivarotana sy ny famokarana.
5. Noho ny fahamarinan-toetra, ny mpanjifa amin'ny fitomboana, maro amin'izy ireo no mpanjifa taloha nampidirina.
Ny vokatra fototra:
Wire vy: Wire vy galvanisé, tariby mainty annealed, Nails Wire, Twist Wire, PVC Wire, Cut Wire, U-tpye Wire, Cotton Baling Wire, Double Loop Wire
Wire barbed: Wire barbed, Wire barbed
Fantsika: Fantsika mahazatra, Fantsika tafo, Fantsika Coil, Fantsika beton
harato: tariby welded harato, hexagonal tariby harato, rojo rojo fefy
Ny faritra fivarotanay:
Ny vokatray dia mivarotra tsara eran'izao tontolo izao, indrindra fa Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo, Aostralia, ampahany amin'ny tsenan'i Eoropa sy Amerika Avaratra, tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny vokatra dia mivarotra tsara indrindra amin'ny tsena Afrikana.
Amin'ny ho avy dia hanondrana any amin'ny faritra maro kokoa ny entantsika.
SHENGSONGmanantena mafy ny hametraka fifandraisana ara-barotra amin'ny orinasa hajainao amin'ny fototry ny tombontsoa iombonana amin'ny daty aloha!